News Collection: बलिउडबाट अंगप्रदर्शनको निम्तो
बलिउडबाट अंगप्रदर्शनको निम्तो
हिन्दी फिल्म 'लभ इन नेपाल’मा मैले अभिनय गरेको गीत 'कतरा...कतरा...ले म निकै चर्चामा आएँ । मेरो उदार अंगप्रदर्शनको आवश्यकताभन्दा बढी चर्चा भएको थियो । मलाई बलिउडबाट धेरै फिल्मका अफर आएका थिए, तर सबैमा अंगप्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले बलिउडप्रति मेरो मोहभंग भयो ।
१२ वर्ष भयो मैले फिल्म खेल्न थालेको　। यस अवधिमा मैले २९ फिल्ममा नायिका भएर अभिनय गरेँ　। तर, फिल्मबाट त्यति धेरै ज्ञान भने बटुलिएन　। फिल्मबाट मैले 'मेकअप' गर्न जानेँ　। मैले अभिनय थाल्दा फिल्म क्षेत्र जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ　। फिल्मको भित्री स्वरूप फेरिएन　।
आज पनि नेपाली फिल्मको नायक 'महानायक' नै छ　। उसले फिल्ममा आफ्ना दर्जनौँ शत्रुलाई ढाल्छ, नायिकालाई बचाउँछ　। पहिलेजस्तै नायक आफ्नावरिपरिका सबै शत्रुलाई तह लगाउन सक्छ　। नायिकालाई गुन्डाबाट बचाउन सक्छ　। आमाबाबुका लागि मायालु र इमानदार सन्तान भएर सिनेमामा देखिन्छ　। विश्वासघात नगर्ने र बहुप्रतिभाशाली हुन्छ　। आफ्नी पि्रयसी (हिरोइन)का अगाडि एकैपटक गायक र नर्तक दुवै हुन सक्छ　। र, नायिका भने सधैँ कमजोर भूमिकामा देखिन बाध्य छ　।
कथा, पटकथा र संवाद नै नायकलाई पराक्रमी पुरुष र नायिकालाई रुन्चे महिला खालको हुन्छ　। कलाकारले त त्यही गर्ने जे फिल्मको कथाले माग्छ　। नभए निर्देशकको अघि ऊ कमजोर साबित हुन्छ　। निर्देशकले नायकलाई खलनायकभन्दा कमजोर बनाउन चाहँदैन　। दर्शक पनि नायकलाई बलियो चरित्रका रूपमा देख्न चाहन्छ　। हाम्रो समाज पुरुषप्रधान भएकाले फिल्ममा नायक यति बलियो र प्रभावशाली भएको होला　।
मलाई राजेश हमाल बौद्धिक नायक लाग्छन्　। उहाँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ　। नारीलाई सम्मान गर्नुहुन्छ र मिठो बोल्नुहुन्छ　। फिल्मको सुटिङमा पनि किताब पढिरहेको भेटिन्छ उहाँलाई　।
आदर्श नायक 'यस्तै' हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन　। फेरि नायक चिटिक्क पारेर कपाल कोरेको, अरूले भन्नेजस्तो
'ह्यान्डसम' ह्नैपर्छ भन्ने म मान्दिनँ　। मात्र यत्ति हो, नायकले आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्न सक्नुपर्छ र चरित्रलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ　। नायकहरूमाथि धेरै बोल्न चाहन्नँ　। तर यत्ति हो, नेपालमा हरेक क्षेत्रमा पुरुष हाबी हुने भएकाले फिल्ममा नायकलाई बलियो बनाइएको हुन्छ　। नायिकालाई कमजोर रूपमा प्रस्तुत गरिनुका कारण पनि सामाजिक सोचाइ नै हो　। किनभने यहाँ सदीयौँदेखि नारीलाई कमजोर बनाइएको छ र अहिले ऊ त्यही कमजोरीबाट माथि उठ्न खोज्दै छे　। फिल्ममा महिलालाई रोनाधोना, चुलोचौकामा मात्रै सीमित गरिनु महिलालाई कमजोर बनाउने एकखाले षड्यन्त्र हो　।
सन् १९९७ अगस्टमा भएको मिस नेपालको ताज शिरमा पहिरिनुपहिले म धेरैखाले किताब पढ्थेँ　। मेरो पारिवारिक वातावरणले पनि मलाई त्यो प्रेरणा दिएको थियो　। कल्पनाको बेजोड संसार मेरो अघि हुन्थ्यो　। त्यसअघि मैले टेलिभिजनमा मिस नेपाल प्रतियोगिता हेरेको थिएँ　। मलाई पनि 'मिस नेपाल' हुन पाए कस्तो होला भन्ने लाग्थ्यो　। तर, मिस नेपालको भन्दा बढी मलाई फिक्सन र ननफिक्सन पढ्ने ध्याउन्न हुन्थ्यो　। त्यसवेला मैले पढेका किताबले बेग्लै प्रभाव पारेका थिए　। नेल्सन मन्डेलाको 'अ लङ वे टु पि|mडम' मैले पढेमध्ये प्रभाव पारेको पुस्तक हो　। त्यस्तै ज्याक कर्नफिल्डको 'लिभिङ धर्मा' र टोनी मोरिसनको 'बिलभेड' पनि मलाई मन परेका किताब हुन्　।
म मिस नेपाल भएपछि धेरैखाले प्रतिक्रिया आए　। धेरैले 'अब तिमी समबडी' भयौ,' भने　। १३ वर्षअघि मिस नेपाल भएर पत्रिकामा मेरा ठुल्ठूला फोटा देख्दा मलाई साह्रै अनौठो लागेको थियो　। म मिस नेपाल हुनु एउटा संयोग थियो　। जीवनमा संयोगहरू धेरै जुर्दा रहेछन्　। मिस नेपाल हुनु पनि मेरो जीवनको एउटा टर्निङप्वाइन्ट बन्यो　। मेरा इच्छा र चाहना सीमित रहेनन्　। तर त्यसैवेला लागेको थियो, जीवनमा केही बन्न पनि सकिन्छ, केही नबन्न पनि सकिन्छ　। मिस नेपाल बनेको वर्ष दिनपछि अर्थात् सन् १९९८ मा प्रकाश साय्मिले 'हतियार' फिल्ममा मलाई नायिकाको प्रस्ताव गर्नुभयो　। मैले खेलेका धेरै फिल्म फ्लप भए　। अहिले लाग्छ- मलाई सुहाउँदो भूमिकामा निर्देशकले कहिल्यै खेलाएनन्　। अरू हिरोइनको जस्तै भूमिका मलाई दिए　। तर, म अरूभन्दा भिन्दै भूमिका रुचाउँथेँ　। एउटा पनि त्यस्तो निर्देशक मैले भेटिनँ, जसले मलाई सुहाउँदो भूमिका दिऊन्　।
यो अभिनय यात्राबाट क्यामराअघि कसरी उभिनुपर्छ भन्ने जानेँ　। कलाकारले आँखाले देखेका यथार्थ पात्रको कथा र मनैदेखि अनुभूत गरेको पात्रको पीडाले मात्रै उसले जीवन्त अभिनय गर्न सक्छ, चरित्रमा भिज्न सक्छ　। जीवन्त अभिनय नगरी कलाक्षेत्रमा अडिन नसकिने रहेछ　। फिल्ममा देखाइने परिवेश, मान्छे यहीँका हुन्　। समाजकै छाया पर्दामा देखाइने हो　।
फिल्ममा नायिकाको भूमिका एकोहोरो देखाइन्छ　। सधैँ दुःख र रुवाइ मात्र उसको भागमा पर्छ　। उसलाई दुःखी पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नुका कारण सामाजिक विषयप्रति गम्भीर हुनुभन्दा सिनेमाको बिक्रीलाई प्रमुख रूपमा लिनु हो कि ? नायिकाले समाजको नारी वर्गलाई बोकेको हुन्छ　। यहाँ धेरै छन् दुःखी नारी　। उनीहरूको दुःख फिल्ममा देखाउन खोजिएको होला　। फिल्ममा हिरोइनलाई प्रस्तुत गर्ने शैलीले समाजको वास्तविक प्रतिविम्ब देखिन्छ　। समाजको गाम्भीर्य पनि फिल्ममा हुँदैन　। झन् महिला पात्रले त समाजका वास्तविक पात्रप्रति न्याय गर्न सकिरहेका छैनन्　। नाच्न जानेर, सुन्दरी मात्र भएर हिरोइन हुन सकिन्न　। तर, सुन्दरी त हुनैपर्‍यो　। बडी ल्याङवेज (हाउभाउ) पनि उत्तिकै आवश्यक छ　।
सन् २००३ मा भारतीय निर्देशक रजत मुखर्जीले 'लभ इन नेपाल'मा मलाई अनुबन्ध गरे　। त्यसको गीत 'कतरा...कतरा...'ले म बढी चर्चामा आएँ　। गीतमा मैले उदार भएर दिएको अंगप्रदर्शनका लागि बढी चर्चा भएको थियो　। अहिले भए म त्यस्तो सिन दिन्नथेँ　। अहिलेचाहिँ वेला-वेला सोच्छु- मैले हदै पो अंगप्रर्दशन गरेँ कि ? तर, त्यसप्रति मलाई कुनै पछुतो छैन　। जे गरेँ, ठीकै गरेँ भन्ने लाग्छ　। अहिलेचाहिँ अंगप्रर्दशनप्रति कुनै मोह पनि छैन　। त्यसपछि पनि बलिउडका धेरै फिल्मका लागि मलाई बोलाइएको थियो, तर सबै अंगप्रदर्शनकै भूमिकामा　। तर, मलाई बलिउडका फिल्म खेल्नै मन लागेन　।